အိုဟောင်းယဉ် ဆိုရာဝယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အိုဟောင်းယဉ် ဆိုရာဝယ်
Posted by myanmarcitizen on Feb 29, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ဘုရင့်နောင်ဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းမီးပွိုင့်မိတယ်ပေါ့ဗျာ။ မီးကလဲစိမ်းနေပြီကားတွေကမထွက်သေးဘူး ဟွန်းတွေကလဲ တီးလိုက်ကြတာ။ ဒါနဲ့ ကောင်းလေးကိုပြူပြီး ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ ရှေ့မှာကားတစ်စီးပျက်နေတာကိုး။ ပျက်တဲ့ကားကိုသေချာ ကြည့်လိုက်မိတော့ လေးဘီး (B600) ဗျာ။ နံပါတ်ကြည့်လိုက်မိတော့ ၅က- ဆိုပဲ။ ကားကတော်တော်လေးလဲရွဲနေပါပြီ။ ကားသမားကဟိုနှိုက်ဒီနှိုက်နဲ့ လုပ်နေတာ တော်တော်ကြာကြာနိုးတယ်မနိုးလာဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်စီးလာတဲ့ ကားက စပါယ်ယာက ဆရာကြီးလုပ်မနေနဲကတော့ လွတ်တဲ့နေရာတွန်းပေးမယ် အဲ့မှာသာအေးဆေးပြင်တော့ ဆိုပြီး စပါယ်ယာနှစ်ယောက်ကတိုးပေးလိုက်လို့ သူနောက်ကကားတွေမြန်မြန်သွားနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ (ဒါကတော့ ဒီ Post ကိုရေးဖို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးပါ)
အက္ခရာ ကိုကြည့်ပြီးသတ်မှတ်တဲ့ မှုက နဲနဲလေးလွဲနေတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ လမ်းပေါ်မှာမမောင်းသင့်တဲ့ကား တွေအားလုံးကို ရှင်းထုတ်ပစ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ ဗိုက်ပှုလို့ခေါ်လားမသိဘူး (စစ်ကျန် bus) ကားတွေ (၆၁၊ ၄၀၊၃၉ လိုင်း) (စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ) နံပါတ်တွေနဲ့။ ၄ဘီး (B600)။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်အမျိုးအစားမသိ တဲ့ Modal နိမ့် အောက်ကားတွေ အများကြီးပါ။ ဟိုအနားပျက်လိုက် ဒီအနားပျက်လိုက်နဲ့ တစ်ချို့ဆိုမီးခိုးထွက်လိုက်တာများ လွန်ပါရော။ အဲ့ဒီကားမျိုးတွေကိုလဲ ဖျက်သိမ်းတဲ့စာရင်းထဲထဲ့သင့်နေပြီ။
နောက်ပြီး (၆၁၊ ၄၀၊၃၉ လိုင်း) (စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ) ကားပိုင်ရှင်တွေက ကော ဘာလို့ သူတို့ကားတွေကို လာမအပ်လဲ ဆိုတာကို တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အဖြေရှာသင့်တယ်။ (ဒီမိုကလေစီခေတ်မှာ အစိုးရအနေနဲ့ အရင်ကလို့ ပြည်သူတွေကို အတင်းအကျပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူး ပြေလည်အောင်ပဲလုပ်ပေးရတော့မယ်)။
အစိုးရအနေနဲ့ ကားဝယ်ယူခွင့်ကို ထိမ်းချုပ်ထားတာကို(ယခုအချိန်မှာ)လက်ခံပါတယ်။ (ကားဟောင်းတစ်စီးရှိရင် ကားသစ်တစ် စီးဝယ်ခွင့်ပေးတယ်)။ ဒါမှ ယဉ်ပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် လမ်းတွေ၊ မီးပွိုင့်တွေ၊ Traffic Jam အရမ်းများတဲ့နေရာတွေမှာလဲ အဆင်ပြေအောင် မြန်မြန်လုပ်ပေးပြီးရင်တော့ တစ်ဆင့်တက်ပြီး တော့ဝယ်ယူခွင့်ပြုပေးရမယ်။ အခုအချိန်မှာ အိုဟောင်းယဉ်အစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ကို (ယဉ်ဟောင်း၊ ယဉ်စုတ်) မမြင်ရတော့အောင်ကို လုပ်သင့်တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူ၊ သင်္ဘောသား ၊ company တင်သွင်းခွင့် တွေကို ခတ္တရပ်ထားပြီးတော့ ကိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်။ (အဲ့လိုပြောလို့ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူနဲ့၊ သင်္ဘောသား အကို၊အမ၊ညီ၊ညီမတွေ ဆဲချင်လဲဆဲစေတော့ ရေးလိုက်ပြီ)။ ဒါမှ Traffic Jam ကလဲပိုများမလာ တော့ဘူး။
ခေါင်မိုးကမိုးယို ထိုင်ခုံကကျိုး လမ်းပေါ်ခဏခဏပျက်တဲ့ Bus ကား။ စာဖတ်သူတွေလဲ ခဏခဏ တွေ့နေရမှာပါ။ Bus ကားတွေကိုလဲ အဆင့်မြှင့်တင်သင့်နေပါပြီ။ အထူးကားတွေပေါ်လာပါတယ် ဘာမှမထူးပါဘူး တစ်ချို့အထူးကားတွေဆိုရင် ထိုင်ခုံတွေခပ်စိပ်စိပ် နဲ့လူများများထိုင်နိုင်အောင် လုပ်ထားတော့ ဒူးခေါင်းက ကြပ်ပြီး ဘယ်လိုမှကိုထိုင်လို့မရပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့ QQ wagon လိုစောက်ဖြစ်မရှိတဲ့ကားမျိုးရောင်းရတာလဲ။ ဒီလိုကားမျိုးတော်တော်များများ ကို Taxi လုပ်ပြီးဆွဲနေတာ တွေ့ရတယ်။ တစ်ခါမှမစီးဘူးလို့ တစ်ရက်က ငှားစီးမိပါတယ် အထဲမှာစီးရတာ Relax မဖြစ် ပါဘူး။ ရှေ့ကစီးတဲ့သူဆိုပိုဆိုးမယ်။ နဲနဲလောက်များ ၀နေရင်တော့ အဲ့ကားကိုငှားမစီးကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါ တယ်။ ဒူးရှည်ရင်၊ အရပ်မြင့်ရင်လဲ အဆင်မပြေလောက်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ခရီးကပြန်လာတဲ့သူ ဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့အိတ်တွေကို ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်ကိုသာတင်ပြီးစီးရမယ်ပုံပဲ။ အဲ့ဒီကားမျိုးတွေရောင်းမယ့်အစား japan ကားကို အဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပေးလို့ရတာပဲ။ ခုပဲဈေးနှုန်းသိချင်လို့ japan လေလံ site ကိုဝင်ကြည့်တာ US 1230 နဲ့တောင် ၀ယ်လို့ရတဲ့ကားတွေရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့များ QQ wagon ကိုရွေးပြီးရောင်းရတာလဲ။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီလို ကားမျိုးကိုကော Taxi လုပ်သင့်သလား ဆိုတာကိုကော တာဝန်ရှိသူတွေ စဉ်းစားမိရဲ့လား။
နိုင်ငံကိုတိုးတက်ချင်တယ်။ ပြောင်းလဲနေတာကိုအားမရသေးဘူး။ အသက်ပေးပါ့မယ်။ ဒီလိုစကားမျိုးတွေသာ ပြောပြောနေကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့က နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။နက်သထက်နက်အောင်နှက်နေ ကြတာပါ။
နိုင်ငံကိုကောင်းစေချင်ရင်၊ ပြည်သူတွေကို ကြွယ်ဝချမ်းသာ စေချင်ရင် သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေကစပြီး အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်။ အဲ့လိုလုပ်ပေးဖို့ အတွေးအခေါ်အမြော်အမြင်ကောင်းတွေ ရှိရမယ်။ အဲ့လိုမျိုးမရှိလို့ကတော့ ခင်ဗျားတို့ပါးစပ်ကသာပြောနေ ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်ခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သမတက အစ သူတောင်းစား အဆုံးအားလုံးပြောင်းလဲဖို့လိုပါပြီ။
ပြောချင်တာများနေလို့ စကားလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ လမ်းပေါ်မှာ ပြယုတ်မကောင်းသောယဉ်များ။ မော်တော်ယဉ်လာအပ်ပြီး အသစ်တစ်စီးတင်သွင်းခွင့်လျောက်ထား လာသူများ ကိုလဲ ခွင့်ပြုသင့်သည်ဟုထင်မိပါသည်။
ဘာဖြစ်လို့ QQ wagon လိုစောက်ဖြစ်မရှိတဲ့ကားမျိုးရောင်းရတာလဲ။
ဘယ့်နယ်ဗျာ တရုပ်ကား အဆင့်မမှီတဲ့ကားကို ခုပေါက်ဈေး..သိန်း၁၄၀ တဲ့..
ချယ်ရီ နဲ့ တာတာ က တချိန်က ရောင်းချ ခွင့် အတွက် အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့.. ဈေးပြိုင်မှာ ချယ်ရီ ကို မမှီလို့ ဆိုလား ၃၅ နဲ့ ထုတ်မယ်ဆိုပြီး စာချုပ်ချုပ်တာ ကြားတာပဲ..
ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ လူတွေ လက်ရောက် ၁၂၀ ၁၃၀ ဖြစ်သွားတာလဲနော်.. ပေါတာ ကို ပေါ တဲ့ နှုန်းနဲ့ ရောင်းရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတော့ ရှိတယ်။
Admin ကြီးရေ တင်ပြီးသားကို ပြန်ပြီး edit လုပ်လို့မရဘူးလားခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် bold လုပ်ထားတာလေး တွေပျောက်နေလို့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ တချို့ နံပတ်အမြင့် နဲ့ လေလံကား အစုတ်တွေ အတွက်လဲ စဉ်းစားသင့် တယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့ရှမ်းစတားဂျစ် တွေဆိုလဲ နံပတ်ကအမြင့် ကြီးတွေနဲ့ ကားတွေက စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ။ နောက်ပြီး တယုက်ပြည် ကကားစောက်ဖြစ် မရှိတဲ့ ကားတွေသွင်း တာလဲရပ် သင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
အောင်မယ်လေး။ ယဉ်အိုယဉ်ဟောင်းတွေပယ်မယ်။ နယ်နှင်မယ်ကြားတော့ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေနဲ့တလုံး တန်းစုတ်ပြတ်နေတဲ့ကားတွေကနံပါတ်အမြင့်တွေတလူလူနဲ့ထောင်လွှားနေလိုက်ကြတာ။ ကားကကြည့်တော့ အရည်ကြိုရင်တောင်နဲနဲပဲထွက်မယ်။ နံပါတ်ကလန်ထွက်နေတယ်။ ဟောအခုတလုံးတန်းတွေ ကိုပါမစ် လဲပေးရောဒင်းတို့ငုတ်တုတ်မေ့တာပဲ။ သူတို့ငုတ်တုတ်မေ့တာအရေးမကြီးဘူး။ လမ်းပေါ်မှာနံပါတ်မြင့်တွေနဲ့ ဟိုထိုးဒီထိုးကပြသနာ။ ဂျပန်မှာကလဲလေလံဆိုဒ်ထဲဝင်ကြည့်ရင်ဈေးတွေကတော့တယောက်ကို ၂ စီး ၃ စီး ၀ယ်နိုင်မယ် ထင်ရပေမဲ့တကယ်လဲဝယ်ရောလေလံဆိုတော့ကြမ်းခင်းဈေးထက် ၄ ဆလောက်များ သွား ပါရောလား။ အခွန်နဲ့ LC ဖွင့်၊ ပွဲခပေးနဲ့ ကားတစီးဒီရောက်ဖို့ကိုယ့်ကားကိုယ်အပ်တာတောင်သိန်း ၁၁၀ လောက်ကျော် မှရောက်တယ်။ မလွယ်ပါဘူး။ ချယ်ရီတွေကလဲအခုတောင်လမ်းကြမ်းကြမ်း မောင်းရင် အောက်ပိုင်း သံတွေ ဆူနေတာပဲ။ ၃ နှစ်ခံကံကောင်း။ နောက်သူတို့ကပြောသေးတယ်။ ယဉ်တစီးဖျက်တစီးအစား ထိုးတာမို့ကားလမ်းကြပ်စရာမရှိဘူးတဲ့။ တကယ်တော့ဒါမဟုတ်ဘူး။ သတိထားမိကြလားမသိဘူး။ အခုပိုပိုလမ်းတွေကြပ်လာတာကို။ အရင်ကကားတွေ ( ယဉ်အိုယဉ်ဟောင်း ) တော်တော်များများ က မြေစိုက်ကားတွေ။ မောင်းလို့မရလို့လမ်းပေါ်မတက်ပဲအိမ်မှာပဲသိမ်းထားပြီးဆီထုပ်ရောင်းနေတာ။ အခုအပ်ဆိုတော့သူတို့ကို ကလော်ထုပ်လာပြီးကားသစ်သွင်းလိုက်တော့ အရင်သိမ်းထား တဲ့ကားတွေ အားလုံးလမ်းပေါ်ရောက်လာသလိုဖြစ်ပြီးပိုကြပ်လာတာ။ မလွယ်ပါဘူး။ ပြောရရင်ရှည်ကုန်တော့မယ်။
ကားအကြောင်းဆိုတော့ ၀င်မပြောတော့ပါဘူး ကားဆိုလို. ဆိုက်ကားတောင် ၀ယ်မစီးနိုင်ပေါင်ဗျာ……..
ဒီလောက်ရန်ကုန်မှာ ကားတွေပေါနေတာ ဘာလို.များ တစ်စီတလေ ကျွန်တော်မပိုင်တာလဲမသိပေါင်ဗျာ…….
စဉ်းစားစမ်း သင့်ခ် သင့်ခ် သင့်ခ် သင့်ခ်.ခ်ခ်ခ်
အဲတာ ရွှေတိုက်စိုးကံကောင်းလို့ ကားမပိုင်တာပေါ့။
ဆီဒုက္ခ ၊ ပြင်ထိန်းဒုက္ခ၊ ပါကင်ဒုက္ခ၊ လမ်းပိတ်ဆို့တဲ့ဒုက္ခ၊ ဆိုက်ကားက တမင်ပွတ်ဆွဲပြီး အလျှော်တောင်းတဲ့ဒုက္ခ၊
ပြီးတော့ အဆုံးတနေ့ ခွက်ခွက်လန်ရှုံးတဲ့ဒုက္ခက လွတ်ငြိမ်းတယ်လေ။
စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ .. တက္ကစီပဲစီး…
စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ ကားလောကပါလားဗျာ။
မြန်မာပြည်မှာ ကသူများနိုင်ငံတွေရဲ့ စွန်ပစ်ကားတွေ၊
မော်ဒယ်ရယ် ရုပ်ရယ် နဲ့ဖြတ်ရမှာ…
သူ့အစားသွင်းလာတဲ့ ယာဉ်သစ်ကို ကညနမှတ်ပုံတင်ကြေးထပ်ကောက်တာ။
အဲဒီမှာတင် သွင်းလာတဲ့ကားက ဈေးမြင့်သွားပြီး အောက်ကားလို့ခေါ်တဲ့ လက်ရှိကားဟောင်းတွေ ဈေးမာပြီးခံနေတာ။
တကယ်လို့ ဂျပန်က သိန်း၄၀တန်ကားတစီး ရန်ကုန်နံပါတ်ထွက်အပြီး ၁၄၀ လောက်ပဲကျမယ်ဆိုရင်
ဖိုက်ဘာနဲ့ ရှော့ဘားထိုင်ထားတဲ့ ပြည်သူ့မေတ္တာချယ်ရီတွေ တစီးမှတောင်ရောင်းရမှာမဟုတ်။
အနာဟောင်းတွေ အဆွခံ နေရတယ်။ မီးဒုတ် လိုက် ရမလား .. ဦးဦးပါလေရာ ရေ … :-)
အောင်မယ်လေး။ ဈေးမမာနိုင်ပါဘူးဦးဦးပါလေရာရယ်။ လက်ရှိကားဟောင်းတွေဈေးကျတာ မှပြုတ်ကျတာမှအနာသက်သာအုံးမယ်။ အရင် သိန်း ၆၀၀ တန်ကားက ယနေ့ သိန်း ၁၈၅ ပဲရှိတော့တာကို။ ကားပိုင်ရှင်တွေငိုနေတယ်။ သွင်းလာတဲ့ကားတွေကတော့အခု အခွန်ထပ်လျှော့ မယ်ကြားတယ်။ ရှေ့ကသွင်းထားတဲ့လူတွေနာပြီပဲ။ နောက်ဝင်လာတဲ့ကားသစ်တွေကဈေးပိုသက်သာတော့မယ်။ ကိုရွှေရေ။ ကားမ၀ယ်နဲ့အုံး။ ခဏစောင့်။
သူငယ်ချင်းက ၇၀၀ ကနေ ၂၀၀ စွန်းစွန်းပဲ ကျန်တော့တာ ဘယ်လို လုပ်မလဲ.. ကိုယ့်တန်ဖိုး ကိုယ်သတ်မှတ်ပြီး စီးနေရတယ်တဲ့.. အဲလို ပြောတယ်။
နဲနဲ မတူတာလေး မန့်မယ် ပိုစ့် ပိုင်ရှင်ရေ။
သီရိမင်္ဂလာဈေး မှာ ကုန်တိုက် တဲ့ အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးကျကုန် သော ထိုထို လေးဘီးကား ပိုင်ရှင်များသည် ကားအပ်ပြီး နောက် တစ်စီးထပ်ဝယ်ရန် မတတ်နိုင်တာက တစ်ကြောင်း … ၀ယ်နိုင်သည်ထားဦး.. ကားသစ်နဲ့ လုပ်စားရန် (ကားညစ်ပတ်မည် စိုးသောကြောင့်) ဆုံးဖြတ် ဖို့ အနည်းငယ် ခက်ခဲ နိုင်သည်တစ်ကြောင်း … စသည်များကြောင့် အချို့ အချို့  ကေစ့် များမှာ တစ်ဖက်ထဲ ကြည့်လို့ အဆင်မပြေနိုင်ပါကြောင်း ဘာကြောင်း … ညာကြောင်း …
” လက်ရှိမှ…လက်မဲ့ ”
ယဉ်အိုယဉ်ဟောင်း လဲလည်ရေးအစီအစဉ် အပေါ် ကားဟောင်းပိုင်ရှင် အသက်ကြီးကြီး ကိုယ်တိုင်မောင်း တက်ကစီ သမားတစ်ယောက်ပြောတာတော့…..။ ”အစိုးရကတော့ စေတနာနဲ့လုပ်တာလားဘာလားတော့မသိဘူး အဘ ဒီကားလေးနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလာတာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ပြီ အိမ်စရိတ် စားစရိတ် ကလေးတွေကျောင်းစရိတ် နဲ့မစုနိုင်ပါဘူး ကားသစ်လဲရင် နောက်ထပ် သိန်းတစ်ရာအထက် လိုက်ရမှာဆိုတော့ မတက်နိုင်ဘူးလေ ဒီကားအဟောင်းလေးရောင်းပြီး စပေါ်တင်ပြီး အငှားမောင်းရတော့မှာပေါ့တဲ့…။
Surf ကိုဖင်ဖြတ်၊ Van ကို ဖင်ဖြတ်နဲ့ တတ်လဲတတ်နိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်။ အခုတော့ super custom ကို ဘာမှ မဖြတ်ပဲ (မြန်မာပြည်တွင်ပြုလုပ်သည်)လို့ ရေးသားနိုင်သည်အထိ တိုးတက်လာသော စက်မှုဇုံများ
ဟုတ်လဲဟုတ်ဘဲနဲ့ စက်မှုဇုံကော်မတီနဲ့ ကညန စုပေါင်းပြီးလုပ်စားနေကြတာပါလား
ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ တိုးတက်မှမဟုတ်တဲ့ စက်မှုဇုံ
၀င်းဝင်းရေ “မြန်မာပြည်တွင်ပြုလုပ်သည်” ဆိုတာ အဲ့စာလေး ၇ လုံးကိုပဲပြောတာတဲ့ခင်ဗျ။ :-)
မှန်ပ ဝင်းဝင်းရေ။ကားအဟောင်းကို ဟန်လုပ်စီးရတဲ့ခေတ်မကုန်သေးဘူး။